Ukukhethwa kweenoveli ezifanelekileyo
Ukukhanya kwehlobo, kwaye emva kobusuku, nguJón Kalman Stefánsson
Ingqele inako ukukhenkceza ixesha kwindawo efana ne-Iceland, esele ibunjwe yindalo yayo njengesiqithi esixhonywe kuMntla weAtlantiki, umda phakathi kweYurophu neMelika. Yintoni eye yaba yingozi yejografi ukubalisa izinto eziqhelekileyo ngokukhethekileyo kwabanye...
Iincwadi ezi-3 ezilungileyo zikaJohn Fante
Ukuphefumlelwa kukaBukowski kwaye wahlangula enkosi kulo mcebisi. UJohn Fante sele enayo into yombhali odumileyo eMelika ophantsi kophikiso olunzulu lwenkulungwane yamashumi amabini. I-dichotomy phakathi kwempumelelo yendlela yobomi baseMelika kunye nezithunzi zentlalo nezopolitiko; phezu…
Iincwadi ezi-3 ezilungileyo kakhulu nguPatricio Pron
Ngegama elikhunjulwa ngokulula ngenxa yomculo wakhe, u-Patricio Pron waseArgentina ujonge ukuba ngumbhali wesalathiso kule nkulungwane yama-XNUMX. Umphathi webali kwisizukulwana esifanelekileyo nesichumileyo solu hlobo lwengxelo, njengoko kubonisiwe yiArgentina uSamanta Schweblin okanye uOscar Sipán kuba ...
Umbhali ongumDatshi uTommy Wieringa usisa kwibali eliyinyani malunga nabo bantwana babazingeli benkulungwane yama-XNUMX. Abantu bayo nayiphi na iminyaka bekhangela ikamva elaliweyo. Umbono wakudala wemida njengobububhanxa bokugqibela, xa umntu ekwazi ukwala ilungelo loku ...
Iincwadi ezi-3 ezilungileyo ze Charles Bukowski
Wamkelekile kwihlabathi laseBukowski, umbhali ongahloniphiyo ngokugqwesa, umbhali weencwadi ze-visceral ezisasaza i-bile kuzo zonke iindawo zoluntu (uxolo ukuba ndibe "nombono"). Ngaphandle kokusondela kule genius ngophendlo lwe-Intanethi olunje «Charles Bukowski amabinzana »onokuthi ubuyisele ngayo imibono yakho ...
Ukuphela kwexesha, ngu-Ignacio Martínez de Pisón
Phakathi kukaMartínez de Pisón kunye noManuel Vilas kukho ukungqinelana koncwadi ngaphaya kwento eyenzekileyo yenzeke. Yinto ebonakala ngathi ingena kwezona zinto zibalulekileyo zoncwadi ngokubhekisa kwiihorizoni ezibalulekileyo ezingafane zibonwe kwingxelo yangoku. Yintoni endiyaziyo, mhlawumbi yayiyinto yokuthimba kwi-80s, ...
Umntakwethu, nguAlfonso Reis Cabral
Izibophelelo zegazi eziphakame ngokufanayo kumthi wosapho zinokuphela zinciphile ukuya kuthi xha emanzini. I-Kainism ngumyalelo wosuku welifa, amabhongo okanye umona oxhaphakileyo ngalo lonke ixesha umntu enenkumbulo. Ubuzalwana akusoloko buthetha ukuqonda kunye ne-vibes elungileyo. ...
UClaus noLucas, nguAgota Kristof
Ngamanye amaxesha iimeko zenza iyelenqe lokwenza into eyahlukileyo ngenxa yengxaki okanye ubunzima. Kwimeko ka-Agota Kristof yonke into yahlangana ukuze angabhali lo mqulu weenoveli ezintathu ngolwimi lwangaphandle olwamamkelayo ekubalekeni kwakhe eHungary entsha elawulwa ngokufihlakeleyo ...
UCandela, nguJuan del Val
Ngenoveli yakhe yangaphambili «Kubonakala ngathi kuyaxokwa» eneempawu zobuntu (kodwa zilinganiselwe ngokupheleleyo kubomi bakhe), uJuan del Val waxhokonxa ingxwabangxwaba kunye namadyungudyungu kumacandelo ahluke kakhulu, kude nangaphaya kokubhalwa ngokungqongqo. Kodwa lo ngomnye umcimbi, malunga nokugqithileyo esele ityhilwe ngokwaneleyo ...